Neymar Jr oo Saaxiibadiisa kooxda Paris Saint-Germain u sheegay in……. – Gool FM
Dajiye June 8, 2020
(Paris) 08 Juun 2020. Sida laga soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain rabitaanka Neymar Jr ee ah inuu ka tago kooxda Paris Saint-Germain ayaa u muuqata mid aan wali isbadelin.
Wargeyska ayaa sheegay in Neymar Jr uu gaaray heer uu ku wargaliyey asxaabtiisa kooxda Paris Saint-Germain rabitaankiisa ah inuu dib ugu laabto kooxda reer Catalan ee Barcelona.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa lagu soo waramayaa in saaxiibadiis kooxda PSG uu u sheegay: “Waxaan doonayaa inaan aado Barcelon”.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Neymar uu rajeynayo in kooxda Paris Saint-Germain ay ogolaan doonto miiska wada hadalka ay la fariisato Barcelona, inkastoo ay adag tahay in howlgalkan la soo gaba gabeeyo, sababa la xiriira dhibaatada dhaqaale ee ku habsatay Barca, sida Yurub inteeda kale.
Si kastaba ha noqotee, Neymar ayaa soo xirtay maaliyada kooxda Barcelona intii u dhexeysay 2013 ilaa iyo 2017, wuxuuna kula guuleystay koobab badan, kahor inta uusan ugu biirin Paris Saint-Germain qiimo lacageed dhan 222 million euros.
Macallin Quique Setien oo ka war bixiyay xaaladda dhaawac ee Lionel Messi